Fokon'i Efraima - Howling Pixel
Ny fokon'i Efraima dia vakiny iray ao amin'ny fokon'i Josefa izay isan'ny foko roa ambin'ny folon'i Israely. Ny vakiny faharoa dia ny fokon'i Manase. Tamin'ny ady nifanaovan'ny fokon'i Efraima sy tamin'ny sisan'ny fokon'i Israely dia ampy hahafantarana ny Efraimita ny tsy fahaizany manonona ny hoe shibboleth izay tononiny hoe sibbolet.
I Efraima (hebreo: אֶפְרַיִם na אֶפְרָיִם / Efrayim) dia zanaka lahy faharoan'i Josefa tamin'i Asnata vadiny ary i Manase no rahalahiny. Ireto ny zanany lahy: Sotela, Bekera, Tahana (Nomery 26.35), Ezera, Eleada ary Beria (1Tantara 7.20-23).
Olona isan'ny fokon'i Efraima
Isan'ny fokon'i Efraima i Josoa (na Jôsoe) sy i Jeroboama I mpanorina ny Fanjakan'i Samaria.
Isan'ny Fanjakan'i Samaria ny fokon'i Efraima tamin'ny fisarahan'ny Fanjakan'i Israely ho fanjakana roa. Tamin'ny nandravan'ny Asiriana ny io fanjakana io dia natao sesitany niaraka amin'ny foko sivy hafa tany Asiria vahoaka tao amin'ny fokon'i Efraima ka lazaina fa isan'ireo foko nanjavona izy. Ireo Samaritana amin'izao fotoana izao dia milaza fa taranak'i Efraima sy Manase.
Efraima (zanak'i Josefa)
I Efraima dia zanaka lahin'i Josefa tamin'i Asnata, sy zafikelin'i Jakoba, ary zandrin'i Manase. Ireto ny zanany lahy: Sotela, Bekera, Tahana (Nomery 26.35), Ezera, Eleada ary Beria (1Tantara 7.20-23).
Ny taranak'i Efraima no namorona ny iray amin'ireo fokon'i Israely roa ambin'ny folo, dia ny fokon'i Efraima izay zana-pokon'i Josefa. Isan'ny taranak'i Efraima i Josefa zanak'i Nona sy i Jeroboama zanak'i Nebata. Isan'ny fokon'i Efraima koa i Josoa (na Jôsoe).
Ny Samaritana amin'izao fotoana izao dia milaza ny tenan'izy ireo ho taranak'i Efraima sy Manase.
Ny fokon'i Benjamina dia iray amin'ny foko roa ambin'ny folon'i Israely.
Ny fokon'i Josefa dia iray amin'ireo fokon'i Israely. Nizara ho foko roa izy dia ny fokon'i Efraima sy ny fokon'i Manase.
Ny fokon'i Manase dia vakiny iray amin'ny fokon'i Josefa ka ny faharoa dia ny fokon'i Efraima. Isan'ny fokon'i Israely izy. Matetika ao amin'ny Baiboly dia isaina ho foko iray manokana ny fokon'i Manase ka asolo ny an'i Josefa. Toy izany koa ny fokon'i Efraima.
I Jefta na Jiftà na Jefte dia mpitsara tao Israely araka ny Bokin'ny Mpitsara (Mpits. 10.7-12-7). Isan'ireo atao hoe mpitsara lehibe izy. Amin'ny teny hebreo dia tononina hoe יפתח / Yip̄tāḥ io anarana io. I Jaira no mpitsara nodimbasany ary i Ibzana no nandimby azy.
Notendren'ireo mpitondra an'i Gileada i Jefta mba hitarika ny ady tamin'ny Amonita izay nandrahona azy ireo. Nandresy izy ka niteraka fialonana teo amin'ny fokon'i Efraima izany. Nanafika azy ny Efraimita nefa tsy nahomby ka nahatonga an'i Gileada ho afaka nizaka tena, ary angamba tsy niankina tamin'ny firenen'i Manase raha tsy taorian'ny fandresen'i Gideona ny Midianita.
Ny Jiosy igbo na Jiosy ibo dia isan'ny foko igbo ao Nizeria izay manaraka ny fivavahana jiosy sady milaza ny tenany fa tavy amin'ny fifindra-monin'ny Hebreo sy ny Jiosy taty aoriana, avy tany Afrika Avaratra sy tany Egipta ka nankany Afrika Andrefana. Ny lovantsofina ao amin'ireo Igbo ireo dia mitantara fa io fifindra-monina io dia niseho tany amin'ny 1500 taona tany aloha. Ny ankamaroan'ny Jiosy anefa dia tsy mihevitra ny Igbo ho tena Jiosy.
Ny Igbo dia milaza ny tenany fa avy amin'ny fokon'i Efraima sy ny fokon'i Naftaly sy ny fokon'i Manase sy ny fokon'i Levy sy ny fokon'i Zebolona ary ny fokon'i Gada. Izany fiheverana izany anefa tsy voamarin'ny fandalinana tsara ny tantara. Ny mpahay tantara dia nandinika ny literatiora ara-tantaran'i Afrika Andrefana tamin'ny vanimpotoan'ny fanjanahantany sady nanao izay hampazava tsara ny anjara asa sahanin'izany fiheverabna izany ho an'ireo olona manohana sy nanoratra izany .
Amin'izao fotoana izao dia misy sinagoga miisa 26 ny any Nizeria ary ny vahoaka jiosy igbo dia heverina fa miisa 40 000 any ho any, raha miisa 140 000 000 ny Nizeriana. Ny Igbo any Abuja no betsaka indrindra ary no ahitana ny singogan'i Gihon sy ny an'i Port Harcourt ao amin'ny tapany atsimon'i Nizeria. Ny fivavahan'ny Jiosy igbo dia tarihin'ny raby Hoxard Gorin.
Ny tahirin-kevitra elohista na loharano elohista, izay hafohezina amin'ny litera E, dia iray amin'ireo lahatsoratra efatra vinavinaim-pisiana niforonan'ny boky dimy voalohany ao amin'ny Baiboly, araka ny hevitry ny mpikaroka momba ny Baiboly (Karl Heinrich Graf, Julius Wellhausen sns) tamin'ny taonjato faha-18. Ny telo hafa dia ny tahirin-kevitra iahvista sy deoteronomista ary ny an'ny mpisorona. Misy anefa ireo mpikaroka taty amin'ny taonjato faha-20 izay nitsikera izany petra-kevitra izany ka namela azy.